४ करोड ४२ लाख कोरोना संक्रमितमा मृत्युदर बढ्दै-डब्लूएचओ – www.agnijwala.com
अहिले विश्वभर ४ करोड ४२ लाखमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये ३ करोड २४ लाख निको भएका छन् भने ११ लाख ७१ हजारको ज्यान गएको छ ।
संक्रमितमध्ये यूरोपमा मात्रै ८८ लाख ५० हजार छन् । जहाँ ३५ लाख ३१ हजार निको भएका छन् भने २ लाख ५४ हजार ९ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यूरोपमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या एक हप्तामै ४० प्रतिशतले बढेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले जनाएको छ ।
फ्रान्स, स्पेन, बेलायत, नेदरल्याण्ड्स र रुसमा संक्रमितसँगै मृत्यु हुनेको संख्या एक तिहाईले बढेको डब्लूएचओकी प्रवक्ता डा. मारगेरेट ह्यारिसले बताएकी छन् ।
उनले यूरोपमा खतराको घण्टी बज्न लागेकाले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । । डा. ह्यारिसका अनुसार गएको एक हप्तामै संक्रमितको संख्या एक तिहाईले बढेको र ज्यान गुमाउनेको संख्या झण्डै ४० प्रतिशतले बढेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य सेवा राम्रा भएका देशमा अस्पतालको क्षमताभन्दा धेरै बिरामी भर्ना भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘नयाँ संक्रमित घटेको पाउनेछौं तर त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्छ उनले भनिन्, ‘रातारात यसको नजिता आउँन सक्दैनन् ।’